Maitiro ekugadzirisa zvakare mifananidzo muCarPlay | IPhone nhau
Kune avo vanofarira CarPlay mumotokari, zvakakosha kuti uzive mamwe emabasa ekumisikidza ayo isu atinotenderwa kuita kubva kumagadzirirwo. Beyond mabasa ayo CarPlay anopa naSiri nevamwe, isu tinofanirwa kuve pachena izvo tinogona kugadzirisa mapikicha eapps pane zvatinoda uye kubvisa mamwe maapplication kubva pachiratidziro chemotokari yedu.
Kubva pakuisa mifananidzo pamberi peji rekutanga, kuenda nekusiya iyo skrini iwo maapplication atisingashandise kana kuronga zvekare kuronga kwavo. Iri ibasa rakareruka rinogona kuitwa kubva ku iPhone yedu uye chero nguva kana nzvimbo chero bedzi isu tisiri kutyaira.
Maitiro ekugadzirisazve mifananidzo paCarPlay pamba skrini
Zvakanaka, zviri nyore chaizvo uye isu tinongofanira kuwana iyo Zvirongwa kubva ku iPhone yedu. Kune izvi hatisi kuzoenda kuGeneral uye isu tinopinda muCarPlay sarudzo. Kamwe mukati, mota yedu ichaonekwa uye kana iwe ukabaya padziri, kugoverwa kwemapurogiramu kunoonekwa. Iye zvino tinogona kutanga nekurongwa kwemaapps sekuda kwedu.
Kutamisa app Saiti isu tinongofanirwa tinya pairi takabata uye tichizvuzvurudza kunzvimbo yatiri kuda. Tinogona kutowedzera rechitatu skrini nekukwevera kurudyi
Tinogona bvisa icon kubva pachiratidziri kana tisingashandise Anwendung. Kuti tiite izvi, isu tinongofanirwa tinya pane iyo chiratidzo - iyo inoratidzika mune grey pamusoro peapp uye ichadzika pasi pasi pechiso. Ipapo tinogona kuwedzera iyi app zvakare kudzvanya pane iyo chiratidzo (MaNative apps haatenderi shanduko idzi)
Kugadziriswa kweCarPlay kuri nyore uye chinhu chega chatinofanira kufunga nezvacho kuzviita ndechekuti isu hatigone kubata chero chinhu patinotyaira. Zvimwe zvacho zviri nyore, zvinokurumidza uye zvinobudirira nekuti zvinotibvumidza kuisa maapplication atinonyanya kushandisa pane peji rekutanga. Pane rimwe divi Isu tinotora iwo mukana kukumbira kuti vaenderere mberi nekushandisa maapplication kusevhisi izvo zvisina kuona nhau mune izvi kwenguva yakareba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa zvakare mifananidzo muCarPlay
HBO, Showtime uye Starz yaizove Apple's ace kumusoro kwesleeve yekushambadzira kwayo sevhisi